Uchwepheshe we-Semalt uchaza ukuthi ukhetha ukuthi wena ungayifaka kanjani le-Automation ye-Marketing
I-automatisation du marketing is the process of automation of the actions marketing to the help des outils de communication et de logiciels. I-automatisation du marketing ivumela ukuba umlawuli wezenzo ze-recurrentes, de segmenter le marché et de mesurer en continu le succès des actions en cours.
Uchwepheshe we Semalt , U-Oliver King uchaza ukuthi uzokhuluma kanjani nge-automatisation du marketing, ngalezi zinkinga ezilandelayo.
1. Ukugxila ikakhulukazi ema-mail
Isiphambeko sokuqala abadayisi abenza ngaso sonke isikhathi siwukucabanga ukuthi izinyathelo zokukhangisa ezokukhangisa kufanele zihambisane nokuxhumana kuphela nge-email kuphela. Ils sont utiles ou début. Ngokuvamile, i-automatisation du marketing iyinhle kakhulu ye-strategy yokulandela. Nokho, kunezinye iziteshi zokukhangisa ezifana nokukhangisa okuqukethwe kanye nezinhlangano zomphakathi. Ngokuzikhethela kokuqukethwe komsebenzisi kanye nokuqukethwe kwakho, ungakwazi ukudala ama-automated notifications, ama-mail noma imiyalezo ephethwe yi-content connexe noma izinsizakalo. Ukugxila ku-intanethi kuphela ngamakhasimende we-client, imoto yamakhompiyutha kanye nokuqukethwe kwe-intanethi ku-intanethi.
2. Okumisiwe komuntu
Ukuzikhethela kubalulekile ngoba ukuthumela i-monotone ku-tout le monde kuluhlu lwabaxhumana kungaba yinkinga yakho. La maklayenti adinga ukuzithanda, ngakho-ke ukuthumela imiyalezo efana neyakho akuyona into..Ukuzikhandla kwabantu kudinga ukuhlola kanye nokuqokwa kwama-préférences particulières des clients. Ngemuva kokuthola ulwazi, i-rationaliser le contenu kufanele ibe livré avec cela. Uma kungenjalo, ungakhetha ukuhamba nomsebenzi wakho.
3. Cabanga nge-visuali njengomholi wefayela
Ngezinye izikhathi, yonke le monde ayihambisani nezinsiza ezinikezwa ngu-entreprise. I-automatisation du marketing isiza iqhaza ekutholeni amakhasimende amathuba okusebenzisa izindlela ezihlukahlukene. Ukhomba ukuthi yiziphi izinkampani okufanele zihambisane nazo, kanye nalabo abazokwenza lokho. Ukuzibandakanya akufanele ukubandakanya amaklayenti kanye nalabo abavakashelayo abangayenawo amathuba okuthola amathuba okubambisana nabo.
4. Ungenzi izenzo zakho
I-automatisation du marketing yenza ngokuqinisekile ukuthi i-gagner du temps isebenza ngokuphindaphindiwe. Iveza futhi amathuba okubambisana ne-propriétaire d'entreprise kungenzeka ukuthi ayinakho ukucabanga ekuqaleni. Kungcono ukuphazamisa ukusebenza kwakho ukuze uthole izici ezisebenzayo kanye nezinsizakalo ezingekho. Ngemuva kokuthola imininingwane ye-marketing, ukubeka amazwana futhi uchaze ukuthi kungani lokhu kudlulisa umphumela wokuhlela. La mise en œuvre d'une solution d'automatisation du marketing et la supposition que le travail est terminé constitué une entreprise risquée.
5. Ukuhlukunyezwa kakhulu
Kuyinto elula ukusebenzisa i-automatisation marketing marketing uma ulwazi luyatholakala kalula. Ngaphandle kwalokho, kungenzeka ukuthi ube yinto enzima kakhulu kulo mkhankaso, njengokuthumela amazaziso amaningi noma ukuvakashela ku-entreprise. Kube nomphumela wokuziphatha okwenziwe yi-public, noma ukuphazamiseka komuntu siqu. I-automatisation du marketing ihlose ukudala ama-piste kanye ne-non-les effrayer. Ilayisha ukufaneleka kwedivayisi ... Engeza kuhlu lwezifiso Ukungeza ... Kungezwe ohlwini lwezifiso Susa Iyasusa ... Unomvuzo osebenza ku lento.